अहिले यस्तो छ अर्चना पनेरुको दरबारमार्गमा रहेको नयाँ धन्दा ! - सुदूरखबर डटकम
अहिले यस्तो छ अर्चना पनेरुको दरबारमार्गमा रहेको नयाँ धन्दा !
काठमाडौ । अर्चना पनेरु चिनाउन हामीले धेरै शब्द खर्च गर्नै पर्दैन । सानै उमेरमा पोर्न फिल्म खेल्ने भनेर निकै चर्चामा आएकी पनेरु पोर्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भन्दै निकै अश्लिल तस्विरपनि खिचाइन् । कहिले के कहिले के हर्कत गरेर चर्चामा आउने पनेरु यतिबेला गुमनाम जस्तै छिन् । अश्लिलताका कारण क्षणिक चर्चा कमाएपनि अश्लिलताकै भरमा लामो समय टिक्न नसकेपछि उनी हाल गुमनाम जस्तै भएकी हुन् ।
यतिबेला अभिनयमा टिक्न र बिक्न नसक्ने कलाकारको पहिलो रोजाइको पेसा रेष्टुरेन्ट व्यवसाय रहने गरेको छ । यस्तैमा एक से एक हट दृश्य दिँदा पनि बिक्न नसकेकी अर्चना आफूलाई टिकाउनको लागि दरबारमार्गस्थित एक क्लबमा आबद्व भएकी छन् । केही दिन अगाडि मात्र सञ्चालनमा आएको ‘रेड एप्पल नाइट डान्स क्लब’ मा अर्चनाले काम गर्न थालेकी हुन् । उक्त रेष्टुरेन्ट तताउनको लागि अर्चनाकी आमा सुनिता पनेरु पनि सँगै रहेकी छन् । क्लबमा आउने दर्शकको फर्माइस् अनुसार उनले नृत्य देखाउँछिन् । फर्माइसको नृत्य पाउँदा बारमा आउने ग्राहकले हुस्की र बियरको चुस्कीसँगै उनी तिर पैसाका बिटा उठाउने गर्दछन् ।
सिम्पल पहिरनबाट नृत्य सुरु गर्ने अर्चानले रात छिपिँदै गएपछि आफूलाई कामुक रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको एक ग्राहकले बताए । क्लबमा उनी लगायत करिव आधा दर्जन युवतीले डान्स गर्ने गरेका छन् । अन्य क्लबको तुलनामा उनको क्लबमा दर्शकको भिड लाग्ने गरेको पाइएको छ । पनेरुले केही समयअघि काठमाडौको नयाँ बसपार्कमा ‘मुन वाकर बार एण्ड क्लब’ मा काम गरेकी थिइन् । केही युवासँगको सहकार्यमा उनले सो क्लब व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यहाँ धेरै समय टिक्न सकिनन् ।
दुबै हात र एक खुट्टा गुमाएका कृष्णलाई दुख बाट रमाईलो गराउन शिशिर भण्डारीले यसरी ईन्द्रेणी कार्यक्रममा खुसीको बिउँ छरे
विहानीको समयमा यस्ता ९ क्रियाकलाप गर्नाले दिन भर रमाईलो, हासो खुसी हुनुका साथै मनोकामना पुरा हुने